संसारका सबैभन्दा धनी १० फुटबल खेलाडी, कसको सम्पत्ति कति ? – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
प्रकाशित: २०७५ साउन २९ गते १०:४६
एजेन्सी – फुटबल प्रंशसकका लागि सँधै चासोको विषय हो, फुटबल खेलाडीको तलब र उनीहरुको सम्पत्ति । अझ यो चासो सरूवा बजार सुरु हुने बेला बढी हुने गरेको छ । सरुवा बजार बर्षमा दुई पटक खुल्छ, जनवरी र सिजनको अन्त्य पश्चात । अब सरुवा बजार खुल्ला हुन केही समय बाँकी छ । र यस्तै चासो फुटबल प्रशंसकहरुमा तिव्र देखिन्छ ।
कसको सम्पती कति ?
रियल मड्रिडका स्टार रोनाल्डोसँग २३ करोड डलर सम्पत्ति छ । उनी १८ बर्षको उमेरमा २००३ मा म्यानचेस्टर युनाइटेसँग अनुबन्ध भएका थिए । उनी २००८ मा ९४ मिलियन यूरोमा रियल मड्रिड आएका हुन् । उनले पोर्चुगलको राष्ट्रिय टिमबाट १४९ खेलमा ८१ गोल गरेका छन् । उनले रियल मड्रिडबाट ३ पटक र म्यान यु बाट १ गरी चार पटक च्याम्पियन्स लिग, २ पटक ला लिगा, २ पटक कोपा डेल रे लगायतका उपाधि जितेका छन् । उनले पाँच पटक बालोन डि’ओर समेत जितेका छन् ।
नेयमारले ब्राजिलको सान्टोस क्लबबाट सानै उमेरमा करियर सुरगरेका हुन् । उनले १७ बर्षको उमेरमा सान्टोसको सिनियर टोलीबाट डेब्यू गरेका थिए । उनी २०१३ मा बार्सिलोनामा अनुबन्ध भएका थिए । जारी सिजनमा उनी बार्सिलोनाबाट पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजीमा किर्तिमानी रकम २२२ मलियिन यूरोमा अनुबन्ध भएका छन् । २६ बर्षिय नेयमारसँग १४ करोड ८० लाख सम्पत्ति छ ।
३२ बर्षिय रुनी अहिले हालै एभर्टनबाट अमेरिकी क्लब डिसी युनाइटेड गएका छन् । म्यानचेस्टर युनाइटेडमा नले २५० गोल गरेका छन् । जुन म्यानचेस्टर युनाइटेडका खेलाडीले क्लबका लागि गरेको सबैभन्दा धेरै गोल हो । उनले १६ बर्षको उमेरमा एभर्टनबाटै डेब्यू गरेका थिए । उनीसँग अहिले ११ करोड २० लाख सम्पत्ति छ ।
९. रोनाडिन्हो (९०.५ मिडियन)
लाम्पार्ड अहिले प्रशिक्षणमा फर्किएका छन् । उनले इंग्ल्याण्डको एक चयाम्पियन्सपिस क्लब सम्हाल्छन् । यी मिडफिल्डरले आफ्नो खेल जिवन वेष्ट ह्याम युनाइटेडबाट सुरु गरेका हुन् । त्यसपछि उनी चेल्सी गए । उनी चेल्सीका सबैभन्दा राम्रा मिडफिल्डर हुन् । उनले आफ्नो क्लब करिअरमा २११ गोल गरेका छन् । उनले इंग्लल्याण्डबाट १०६ क्याम खेलेका छन् । उनको सम्पत्ति ८ करोड ७० लाख डलर रहेको छ ।